गोकुल बाँस्कोटाको क्यारिकेचर गरेपछि चर्चामा चुलिएका भरतमणि पौडेलको कमेडी यात्रा (भिडिओ) :: Setopati
गोकुल बाँस्कोटाको क्यारिकेचर गरेपछि चर्चामा चुलिएका भरतमणि पौडेलको कमेडी यात्रा (भिडिओ)
विवेक राई काठमाडौं, साउन २९
ताप्लेजुङ, दोखुका भरतमणि पौडेल २०६९ सालदेखि काठमाडौंमा भाडामा बस्दै आएका छन्। भाडामा बस्दाका दुःख, रमाइलो उनलाई मज्जाले थाहा छ।
रियालिटी सो 'कमेडी च्याम्पियन' का प्रतियोगी पौडेलले १५ औं एपिसोडमा यही विषय समेटिएको कमेडी खुराक दर्शकमाझ पस्किएका थिए।
उक्त एपिसोडमा उनले गरेको एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाको 'मिमिक्री' नक्कल रातारात भाइरल भइदियो।
'हेप्नी! मान्छेलाई डिस हान्ने! यस्ता-यस्ता कुरा गर्यौं भने नि भाइ हामी मान्छेलाई कोल्याप्स गर्दिन्छौं' यही नै थियो उनले गरेको बाँस्कोटाको नक्कल।
गोकुल बाँस्कोटाको क्यारिकेचर गरेको दर्शकले रुचाएपछि उनी पनि के कम अर्को एपिसोडमा पनि बाँस्कोटाको थोरै क्यारिकेचर घुसाइहाले। त्यो एपिसोड प्रसारणपछि भने बाँस्कोटाले आफ्नो बारेमा ट्वीट गरेको सुनाउँदै पौडेलले भने, 'संसद भवनबारे अर्को एपिसोडमा उहाँको क्यारिकेचर गरेको थिएँ। त्यसपछि उहाँले 'भरतमणिलाई चाहिँ इन्डियाकै सोमा पुर्‍याइदिम' भनेर ट्वीट गर्नुभएछ।'
उक्त एपिसोडपछि भने भरतमणिले आफ्नो प्रस्तुतिमा निधार खुच्याउनुपरेन। जज, दर्शक सबैबाट तारिफमात्र पाइरहे। उनले आफ्नो बाल्यकालदेखिको कमेडियन बन्ने चाहना बल्ल आएर महसुस गर्न थालेको सुनाए।
भरतमणिमा सानैदेखि कमेडियन बन्ने छाँट थियो। उनी त्योबेलामै गाउँघरका मानिसहरूलाई जिस्काउने, अग्रजहरूको नक्कल गर्ने गर्थे। उनले दुरुस्तै नक्कल गरेको देखेर गाउँका ठूला मान्छेहरू उनलाई कहिले फकाएर, कहिले तर्साएर अरूको नक्कल गराउन लगाउँथे।
'सानोमा फलानो यसरी बोल्नुहुन्छ, ढिस्कानो यसरी बोल्नुहुन्छ भनेर नक्कल गर्थे,' त्यो बेला सम्झिँदै उनले भने, 'गाउँमा त फलैंचा हुन्छ, अनि त्यहाँ सबै जना जम्मा भएको बेला ठूला मान्छेहरूले 'यसको नक्कल गर' भनेर भन्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त समातेर यसको गरिनस् भने घर जान पाउँदैनस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो।'
गाउँघरमा मानिसहरूलाई हसाउँदा हसाउँदै उनमा कमेडीको राप झन् बढ्दै गयो। तर परिवारको चाहना उनले सरकारी जागिर खाओस् भन्ने थियो। उनलाई भने सरकारी जागिरमा फिटिक्कै मन थिएन।
'आमाबुवाले त हाम्रो लागि यतिसम्म गर्नुभयो कि पछि त ताप्लेजुङ बजारमै राखेर पढाउनु थाल्नुभयो। तर त्यति दुःख गरेर पढाउनुहुँदा पनि म चाहिँ पढाइमा गतिलो थिइनँ,' हाँस्दै भरतले सुनाए, 'मेरो एघार बाह्रकै परीक्षामा तीन चार वटा दाग लागेको छ।'
जति प्रयास गर्दा पनि पढाइमा रुची नदेखिएपछि आमा-बुवाले पनि उनलाई कलाकारिता नै गरोस् भनेर छाडिदिए।
कमेडीमा उनको यतिसम्म रूची थियो कि गाउँमा कतै कार्यक्रम भयो कि उनी त्यतै दौडिहाल्थे। त्यहाँको माहोल ढुक्थे र मौका पाउनसाथ माइक समातेर दुई चार जना नेताहरूको नक्कल भ्याइदिहाल्थे। त्यो सम्झेर अहिले पनि हाँस्दै उनी सुनाउँछन्, 'मान्छे गलल हसाउन पाउँदा मज्जा लाग्ने तर पढ्न परेपछि चाहिँ निद्रा लागेर, अल्छी लागेर हैरान हुन्थ्यो।'
उनी ताप्लेजुङमै हुँदा सामुदायिक रेडियो 'रेडियो तमोर' मा साताको एकदिन कमेडी कार्यक्रम चलाउँथे। त्योबेला नै उनको जिल्लामा धेरै फ्यान थिए। जिल्लामा कुनै हाँस्यव्यंग्य कार्यक्रम हुँदा उनी त्यहाँ छुट्दैनथे। तर भरतमणिलाई जिल्लामा मात्र खुम्चेर आफ्नो कला विस्तार हुँदैन भन्ने थाहा थियो। त्यसैले उनले काठमाडौं आउने सोच बनाए।
२०६९ साल माघमा उनी रेडियो तमोरको जागिर छोडेर काठमाडौं आए। कलाकारितालाई निखार्ने सोचले काठमाडौं आएका उनले रेडियो कान्तिपुरको 'साथीसँग मनका कुरा' कार्यक्रमका लागि अडिसन दिए। तर छनोट भएनन्। फेरि ताप्लेजुङ नै फर्किए। अनि उही पुरानो अफिस रेडियो तमोर पुगे।
'रेडियो तमोरका सरहरूले तपाईं पनि कलाकारितामा केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हामीले पनि काठमाडौंमा स्टेसन खोलेका छौं। आउनुस् सँगै काम गरौं भन्नुभयो। अनि म त गदगद् भएर हुन्छ भनेर काठमाडौं आए,' उनले सुनाए।
काठमाडौं आएपछि उनले रेडियो तमोरमै काम गर्न थाले।
रेडियोकै मार्केटिङ पनि हेर्थे। त्यसबाहेक कहिलेकाहीँ स्टेज कार्यक्रमहरू पनि गर्थे। स्टेज कार्यक्रम गर्दागर्दै सन् २०१८ मा उनले हङकङ पनि जाने अवसर पाए। यसरी नै काठमाडौंमा बसिरहेका आफूलाई कमेडी च्याम्पियनमा भने पहिलो सिजनमा दले दाइको नामले परिचित सुमन कोइरालाले जान कर गरेको सुनाए।
'च्याम्पियनमा मलाई खासमा पहिलो सिजनमै जान मन थियो। तर त्यो बेला व्यक्तिगत कामले जान पाइएन। दोस्रो सिजनमा भने मेरो मिलनसार भाइ 'दले दाइ' सुमन कोइरालाले जसरी पनि जानुपर्छ भनेपछि अडिसन दिए र छनोट पनि भएर अहिले यहाँसम्म छु,' उनले भने।
भरतमणिले अझै कमेडी च्याम्पियनका केही खुट्किलाहरू सामना गर्न बाँकी छ। तर आफू च्याम्पियन बने पनि/नबने पनि कमेडी यात्रालाई भने जारी राखिराख्ने उनले अठोट लिएका छन्।
उनले भने, 'म आमाबुवाको इच्छाविपरीत कमेडीमा लागेको छु। त्यसैले पनि यही क्षेत्रमा केही गर्न चाहन्छु। कमेडीलाई छोड्ने मेरो सोच नै छैन। त्यसका लागि अग्रज र दर्शकहरूको सल्लाह सुझाव लिन्छु।'
उनले मह जोडी, मनोज गजुरेल, जितु नेपाल, दिपाश्री निरौला, किरण केसी, हरिश निरौला उर्फ 'ककरोज' लगायत अन्य अग्रजहरू आफ्ना प्रेरणाको स्रोत रहेको भन्दै त्यही स्थानमा पुग्न अठोटका साथ अघि बढ्ने बताए।
अहिले भर्खर आफूले कमेडी सिकिरहेको भन्दै उनले भने, 'अहिले म कमेडी च्याम्पियन स्टेजमा कमेडी गर्न सिकिरहेको छु। भर्खर ०.१ को सुरूआत होजस्तो लाग्छ। अब पछाडिका दिन कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराहरू मैले ख्याल गर्नुपर्छ।'
अबका दिनमा कमेडीमै पूरै समय दिने सोच बनाएका भरतमणि मेहनत गर्न सके कमेडीमा पनि राम्रो हुने बताउँछन्।
केही अग्रजहरूले कमेडी गरेरै राम्रो जीवनयापन गरेको भन्दै उनले भने, 'गर्न सक्नेको लागि कमेडीमा पनि राम्रो स्कोप छ। मनोज गजुरेलकै कुरा गर्दा उहाँले कमेडी गरेरै काठमाडौंमा घर बनाउनुभएको छ। संघर्ष गरेर आफ्नो रचना, सिर्जना देखाउनुपर्छ अनि दर्शकको रोजाइको केमडी ल्यायो भने कमेडीमा पक्कै टिक्न सकिन्छ।'
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३०, २०७८, १२:५८:००